CUDURADA LILY IYO DAAWEYNTA: MAXAY CALEEMAHA U NOQDAAN HURUUD AH, CALEEMO GACMEED, SIDA LOOLA TACAALO CAYAYAANKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay cudurada iyo cayayaanka ay saameeyaan foornada gudaha iyo sida loola dagaalamo?
Lily (latum) qoysaska dhirta Lily. Tani waa warshad alwaax ah oo geedo xaraash ah. Qaabka caleemaha ee ubaxa waxay kala duwan yihiin: qulqulaya oval.
Waxay qaadataa geedka ugu qurux badan mid ka mid ah meelaha ugu sharaf badan ee florist thanks thanks ubaxyo raaxo leh, midabka taas oo ah midabada ugu cajiibka ah: casaan, huruud ah, oranji, burgundy, iyo guduud. Waxaa jira qiyaastii 300 nooc oo ubaxyo badan, kuwaas oo badidood la kori karo oo kaliya hawada furan (guryaha iyo beeraha beerta), laakiin sidoo kale guriga.
Inta badan guryaha waxaa laga heli karaa Lily Longiflorum, dahab iyo boqor…
Ubax qurux badan - ubax aad u qurux badan oo u baahan dareen gaar ah. Aqoon la'aan daryeel iyo aan habooneyn shuruudaha xabsiga ayaa keenaya halis ah Dhibaatooyinka aadka u adag in la xaliyo.
Cudurrada iyo daaweynta
Caleemaha Jaalaha ah
Waa maxay sababta caleemaha qaylada qolalka huruud isu beddela:
hawada qallalan ee qolka. Lily waa martiqaadka kulaylaha. Hawada kulaylka ah iyo qoyan - tani waa mid microclimate raaxo leh. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo ubax leh ubax oo ku yaalla tareemo buuxsamay dhagaxyada qoyan, iyo si fiican u dhoobo dhoobo (waa awood u leh inay sii socoto qoyaanka dheer). Fursad wanaagsan ayaa noqon karta in lagu iibsado nuujiyaha hawada gudaha, kaas oo hayn doona boqolkiiba qoyaanka heerka saxda ah;
sunburn Raajooyinka tooska ah ee qorraxdu waxay soo bandhigi karaan warshad caleenta ah si ay u walwalaan heerkulka heerkulka. Codsi loogu talagalay ubax si ay u bedesho meesha ay ku taala xayawaanka waxaa la fahmi karaa haddii caleemaha ay noqdaan huruud dhinaca dhinac ah ee ubaxa, taas oo qorraxda dubeysa.
Iftiin waa lagama maarmaan, laakiin kaliya jilicsan, waa kala firdhiyey.
Sidaa darteed, way ka wanaagsan tahay inaad doorato bariiska ama galbeed ee qolka sida hoyga loogu talagalay ubaxyada;
ma aha nafaqo carrada.
Dhiciddada birta iyo potassium ee substrate ayaa sidoo kale ka qayb qaata huruuda iyo fading of taarikada caleen saxan.
Waa mid degdeg ah oo ay ku quudiso. Warshadu waxay si gaar ah u baahan tahay quudinta inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Isku daridda nafaqada waxaa loo diyaarin karaa si madaxbannaan. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad qaadataa 9 garaam oo sulfate ah iyo 2 tsp. Of citric acid, ku dar milixdaas 3 litir oo biyo ah. Xalkan waxaa loo isticmaali karaa quudinta xididka iyo in lagu buufiyo geedka oo dhan;
bilawga xilliga dayrta. Waqtigaan sanadka, jaalaha ayaa ka baxaya gabadhaada caanka ah sida caadiga ah. Waa lagama maarmaan in la siiyo ubaxa nasasho meel qabow oo aan lagu waraabin (ilaa hal bil).
Saddex sababood ayaa sabab u ah hoos u dhigista:
la'aanta iftiinka. Ubaxa ma jecla qoraxda tooska ah, laakiin uma dulqaadan karo madow. Waa wanaagsan tahay in iftiinku uu ku filan yahay, laakiinse iftiinka caydh ah waa la gooyaa oo magaalo laga heli doonaa.
ciidda waa mid faransiis ah. Muddadii laga bilaabo Maarso ilaa Oktoobar, quruxda kulaylaha waa in la quudiyo bacriminta. Dareer macquul ah. Dharka ugu sarreeya ee dhirta ubaxa dhirta waxaa laga iibsan karaa dukaanka ubaxa.
Sababta ay sababta ubaxu ma barbar dhigo:
mootada aan haboonayn.
Caawin! Dheriga waa in la doortaa yar yar illaa 15-18 cm dhexroor. Haddii dherigu uu ballaaran yahay, ubaxa ayaa si firfircoon u sahaminta booska, sameynta nalalka gabadha. Xoogga ubaxu ma joogayo.
la'aanta hawada iftiinka iyo hawada cusub. Ubaxa wuxuu ku yaalaa daaqada, qolka waa uu si fiican u hawoqonayaa;
si aan haboonayn nasasho dhirta. Waxay ufiican tahay inaad u dirto ubaxa si ay u nastaan ​​meel qabow oo qabow leh dhamaystiran la'aanta waraabinta. Haddii meesha uu yahay mid aad u diiran oo si fiican u iftiimaya, ubaxa ma sii jiri doonaan;
Haddii aad si dhab ah ugu hawlan tahay beerista ubaxyada, waxaad ogaataa sida ay ugu koraan guriga iyo berrinka banaan. Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh si aad u barato sida loo abuuro oo loo bedelo ubax ah, dacaayad ubax, waxay gaartaa ubaxeeda iyo daryeelkooda ku habboon guga.
Cudurada kale ee caadiga ah
kalluun iyo gaduud casax leh. Inta badan waxay u muuqataa sababtoo ah waraabka xad-dhaaf ah oo aan ku filnayn substrate dabacsan (qoyaan dabacsan, acidification ee ciidda).
Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro meelaha waxyeellada leh ee guluubka.
Ka hor intaan laga saarin lakabka dhulka (u leexo qayb ka mid ah ciidda oo jarjar nalalka), iyo sidoo kale jaray xididdada bukaanka, iyaga ku rusheeyaan dhuxul firfircoon ama fungicide hawsha. Nidaamkan kadib, nalalka waa la qalajiyey ilaa 3 maalmood. Waraabinta ayaa la dhimayaa;
Botrytis fungus. Waxaa laga yaabaa inay u muuqato xaalad kulul iyo qoyan.
Dhibco cagaar ah ayaa ka muuqda caleemaha ay saameeyeen fungus, cudurku si dhakhso ah ayuu u faafaa afkoda iyo burooyinkeeda.
Ma jiro wax daawo ah oo ku saabsan cudurkan efir ah oo ay ku dhowdahay suurtagalnimada in laga takhaluso. Ubax wuxuu caadi ahaan dhinto;
fusarium. Noocaan nooca fungus badanaa wuxuu saameeyaa guluubka. Marka hore, guluubku wuxuu badalaa midabka, wuxuu noqonayaa midab madow, ka dibna googooyo.
Markuu cudurka qabadsiiyo, calaamadda koowaad inta badan waa mid hurdi ah oo caleen ah. Waa suurtagal in la badbaadiyo dhirta, ubaxa ayaa ugu dhakhsaha badan u hallaabaya. Sida qiyaasta ka hortagga cudurkan, ka hor intaan la beeri, nalalka waxaa lagu uruuriyaa 30 daqiiqo xal of aasaasiga ah.
Fiiriya ubaxyada loo yaqaan 'Potted Pot' ayaa si dhif ah loo soo weeraray cayayaanka. Laakiin waxaa jira kiisas la mid ah. Cadaabadaha ugu waaweyn ee ubaxa waa: caarada caarada, caarada, mealybug, aphid iyo gaashaanlaha.
Sababta mid kasta oo ka mid ah cayayaanka waxyeellada leh waa hawada qalalan iyo kulul ee qolka.
Waxaad arki kartaa cayayaanka leh indhaha qaawan ee caleemaha iyo jirridaha ubaxa, iyo sidoo kale isbeddellada muuqda ee muuqaalka: lakulanka, huruufaha iyo ka soo baxa saxamada caleen, koritaanka tartiibka. Si loo xakameeyo cayayaanka isticmaal cayayaanka (jilicsanaanta iyo karbofos).
Waxaa lagu talinayaa in la fahmo oo la arko waxa aad quruxda kuleylku ka cabanayso oo isku day inaad ka caawiso sidii ay ula qabsan lahayd xanuunkeeda. Iyada oo laga jawaabayo daryeelkaaga, waxay kugu abaalmarin doontaa blooms.